Duqa Magaalada Samsun ee Magaalada Mustafa Mustafa Demir ayaa shaaca ka qaaday in taraamka uu xor u noqon doono inta u dhaxaysa 13.30 - 10.00, taageerayaasha taga Yılport Samsunspor - Amed Sportive Hawlaha ciyaarta, oo la ciyaari doono 16.30:XNUMX berri. Madaxweyne Mustafa [More ...]
Degmadda Ankara ee Magaalo Weyn, fiidiyowga uu ka diyaariyey "qaanuunka xaddidan ee dhulka hoostiisa" oo laga soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee twitter-ka, wuxuu yiri, "Waxaan jeclaan lahayn dadka iyo dhacdooyinka aad ku daawateen fiidiyowgan inay noqdaan kuwo male-awaal ah. Naxariis dhammaanteen [More ...]
Turkey, xarumaha logistics u dhigay ilaa $ 1 trillion kaabayaasha dhoofinta ee mashruuca helay socda. 25 ka mid ah 9 xarumood ee loojistikada ayaa qorsheeyay inay howlgalaan. 2 xarumo logistics, oo dhismihiisu dhammaaday, ayaa diyaar u ah furitaanka [More ...]
Saldhigga tareenka ee Haydarpaşa, oo dhismihiisa la bilaabay 1906, wuxuu shaqeeyey 19 sano kadib markii la hawl galiyay Agoosto 1908, 105. Xidhnaa tan iyo 18 Juun 2013. Si kastaba ha noqotee, Haydarpaşa Solidarity, iyada oo ah xarunta Haydarpaşa Station [More ...]
Markii la joojiyay Barnaamijka Maalgashiga ee 2020, iibinta Gawaarida Tareenka ee Xawaaraha Sare ee ka yimaada dibedda ayaa la joojiyay, iyo wax soo saarka gudaha iyo qarankaba waxaa loo furay si dheeri ah, taasoo bixineysa xawaare sare oo tikniyoolajiyada gaadiidka xadiidka. [More ...]
İntek Kalıp ve İskele wuxuu noqday xalka wadaha ee Darussalam - Morogoro iyo Morogoro - Dodoma - Makutupora Railway project ee Tansaaniya, oo ah khadka tareenka ugu xawaare sare ee ugu horreeya Bariga Afrika. Daarusalaam waa magaalo dekedeed [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ku dhaqaaqay wadadii tijaabada ugu horeysay Mecidiyeköy - Mahmutbey Line, oo ah wejiga koowaad ee Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line. Madaxweyne Imamoglu, wejiga koowaad ee khadka waxaa la adeegay 19-kii May [More ...]
Shirkadaha Turkey ugu weyn ka mid ah Mercedes-Benz ah Turk, Inc., Brisa Bridgestone Sabanci Turos iyo Sütaş Ulukışla - at hal dhibic ka mid ah dhammaystirka tareenka ka Aksaray Aksaray Ganacsiga iyo daqiiqad ka hor [More ...]
Shirkadda Shiinaha ee Tareenka, oo ka dhigeysa laba-meelood laba meel isku-xirka xawaaraha sare ee xawaaraha sare 10-kii sano ee la soo dhaafay adduunka, waxay la kulmeysaa Ingiriiska. Shirkadda ayaa ah tan ugu weyn adduunka oo dhan 420 kiiloomitir [More ...]
Iyagoo doonaya inay siiyaan gaadiid tayo leh dadka Samsun, SAMULAŞ A.Ş. waxay ka diiwaan gashan tayadeeda dukumiintiyada ay heshay. "Hadafkeennu waa gaadiid tayo leh," ayuu yiri Enver Sedat Tamgacı, Maareeyaha Guud, oo helay "Shahaadooyinka Nidaamka Maamulka Maareynta". Gudaha qaab dhismeedka qiyamka shirkadaha iyo qawaaniinta sharciga [More ...]
Ombudsman-ka ayaa baaray haddii suunka kursiga lagu isticmaali karo tareen xawaare sare leh haddii uu muwaadinku codsado. Warbixinta waxaa loo diyaariyay, “shil ku dhaca xawaare sare sida 255 km saacadiiba, saameynta suunka kursiga [More ...]
Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay, oo ay weheliyaan Duqa Magaalada Karatay Hasan Kılca iyo Maareeyaha Caafimaadka Gobolka Mehmet Koç, ayaa dib-u-eegis ku sameeyay Cisbitaalka Konya, oo bilaabi doona inay si dhakhso leh u adeegaan. [More ...]
Sannadkii 2017, shirkadda Faransiiska ee Alstom waxay isku dayday inay ku biirto shirkadda warshadaha Jarmalka ee Siemens AG. Si kastaba ha noqotee, Guddiga Yurub wuxuu ka hortagay isukeeniddaan la soo jeediyay 2019. Si rasmi ah uga socota Alstom maanta [More ...]
1 2 ... 2.367 »